လက်ပ်တို စပီရိုးစစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်ပ်တို စပီရိုးစစ် (အင်္ဂလိပ်: Leptospirosis) ကို အောက်ပါအတိုင်း အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ လယ်ကွင်းဖျား၊  ကြွက်ဖမ်းသူ၏ အဝါရောင်ရောဂါ ပရီတီဘီယာလ် ဖျားခြင်း စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်။ လက်ပ်တို စပီရိုးစစ်သည် Leptospira အမည်ရှိ ဝက်အူသံချွန်ပုံ ဘက်တီးရီးယား ကြောင့် ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် လုံးဝမှ အနည်းငယ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း မှ စ၍ အလွန်ပြင်းထန်သည့် အဆုတ်တွင်းသွေးယိုစီးခြင်း သို့မဟုတ် ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါ အထိ ပါဝင်တတ်သည်။ လူ၏အသားအရေသည် အဝါရောင်သို့ ပြောင်းလဲကာ၊ ဝိုင်လ်း ရောဂါ (Weil's disease) ဟုခေါ်သည့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် သွေးယိုစီးခြင်းများ ခံစားရသည်။ အကယ်၍ အဆုတ်မှ အလွန်အမင်း သွေးယိုစီးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါက အလွန်ပြင်းထန်သော အဆုတ်သွေးယိုစီးသည့် ရောဂါလက္ခဏာ (severe pulmonary haemorrhage syndrome)ဟု ခေါ်သည်။
လူတွင် ရောဂါဖြစ်နိုင်သော Leptospira လက်ပ်တို စပီရာ အမျိုးခွဲပေါင်း ၁၃ မျိုးခန့်ရှိသည်။ ယင်းတို့ကို အိမ်မွေးနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များမှ ကူးစက်ပြန့်ပွားသည်။ ကူးစက်မှုအများဆုံးပေးသည့် သတ္တဝါမှာ ရှဉ့်နှင့် ကြွက်ကဲ့သို့သော ရှေ့သွားဖြင့် ကိုက်ဖြတ်တတ်သော သတ္တဝါများ (rodents) များ ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် တိရစ္ဆာန်၏ဆီး၊ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ ဆီးဖြင့် ထိတွေ့မှုရှိထားသော ရေ သို့မဟုတ် မြေကြီးမှ တဆင့် အရေပြား၊ မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်များ ထိတွေ့ခြင်းမှ တဆင့်ကူးစက်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် လယ်သမားများနှင့် ဆင်းရဲသား လူတန်းစားများသည် ဤရောဂါကို အများဆုံးခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အိမ်အပြင်ဘက် ပူနွေးစွတ်စိုသော နေရာများတွင် လှုပ်ရှားသူများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ရောဂါရှာဖွေရာတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို တိုက်ခိုက်သည့် ပဋိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ဒီအန်အေကို သွေးထဲတွင် ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းများတွင် ရောဂါရှိနေနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိစေရန် အကာအကွယ်သုံးပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်း၊ ထိတွေ့ပြီးနောက် ဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်း၊ လူများနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်သည့် နေရာများတွင် ကြွက်ကဲ့သို့သော ကိုက်ဖြတ်တတ်သည့် သတ္တဝါများကို လျော့ချခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ခရီးသွားသူများ သုံးသည့် ဒေါက်စီစိုက်ကလင်း (doxycycline]) ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အတိအကျမသိရသေးပေ။ လူသို့ကူးစက်နိုင်မှုကို လျော့ကျရန်အလို့ငှာ အချို့သော လက်ပ်တို စပီရာရောဂါအတွက် တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများဖြစ်သော ဒေါက်စီစိုက်ကလင်း၊ ပင်နီဆီလင် သို့မဟုတ် စက်ဖ်ထရီရာဇုံး တို့ဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ ဝိုင်းလ်ရောဂါနှင့် အဆုတ်တွင်း သွေးယိုစီးခြင်းတို့ကြောင့် သေဆုံးမှုသည် ၁၀% နှင့် ၅၀% အသီးသီးဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်လျှင် လက်ပ်တို စပီရိုးစစ် ဖြစ်ပွားသူဦးရေ ၇ သန်းမှ ၁၀ သန်းခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ဤရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေသည် ပြတ်သားစွာ မသိရှိရသေးပေ။ ဤရောဂါသည် အပူပိုင်းဒေသ တွင် အများဆုံး ဖြစ်တတ်သော်လည်း ကမ္ဘာ၏ မည်သည့်နေရာတွင် မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံများတွင် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များတွင် အချိန်မရွေး ကပ်ဆိုးအဖြစ် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤရောဂါကို ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ ဝိုင်းလ် ဆိုသူမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရောဂါရှိတိရစ္ဆာန်များတွင် ရောဂါလက္ခဏာ လုံးဝမပြခြင်း၊ အနည်းငယ်ပြခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာပြခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် သတ္တဝါအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ခြားနားနိုင်သည်။ အချို့တိရစ္ဆာန်များတွင် လက်ပ်တို စပီရာသည် မျိုးပွားလမ်းကြောင်းတွင် ရှိနေတတ်ကာ မိတ်လိုက်ချိန်တွင် ကူးစက်ပြန့်ပွားစေသည်။
↑ Mosby's Medical Dictionary (9 ed.)။ Elsevier Health Sciences။ 2013။ p. 697။ ISBN 9780323112581။
↑ McKay၊ James E. (2001)။ Comprehensive health care for dogs။ Minnetonka, MN.: Creative Pub. International။ p. 97။ ISBN 9781559717830။
↑ James, William D.; Berger, Timothy G.; et al. (2006)။ Andrews' Diseases of the Skin: clinical Dermatology။ Saunders Elsevier။ ISBN 0-7216-2921- 0။ Explicit use of et al. in: |author= (အကူအညီ)CS1 maint: multiple names: authors list (link):290
↑ Slack, A (Jul 2010). "Leptospirosis.". Australian family physician 39 (7): 495–8. PMID 20628664.
↑ McBride, AJ (Oct 2005). "Leptospirosis". Current opinion in infectious diseases 18 (5): 376–86. doi:10.1097/01.qco.0000178824.05715.2c. PMID 16148523.
↑ Leptospirosis။ The Center for Food Security and Public Health (October 2013)။ 8 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wasiński B, Dutkiewicz J (2013). "Leptospirosis—current risk factors connected with human activity and the environment". Ann Agric Environ Med 20 (2): 239–44. PMID 23772568.
↑ Leptospirosis (Infection)။ 8 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Leptospirosis။ NHS (07/11/2012)။ 14 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Faine၊ Solly; Adler၊ Ben; Bolin၊ Carole (1999)။ "Clinical Leptospirosis in Animals"။ Leptospira and Leptospirosis (Revised 2nd ed.)။ Melbourne, Australia: MediSci။ p. 113။ ISBN095863260X။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်ပ်တို_စပီရိုးစစ်&oldid=705958" မှ ရယူရန်